Little Nightmares II Developer -Tarsier Studios Windows , Switch , PS4 , Stadia , Xbox One 11 February 2021 Mode - Single Player Genre - Puzzle / Platformer DOWNLOAD FOR PC Game Size - 3.8GB https://megaup.net/Vv18/Little.Nightmares.II-CODEX.rar System Requirements Requiresa64-bit processor and operating system . OS: Windows 10. Processor: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350. Memory:4GB RAM. Graphics: Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB | AMD Radeon HD 7850,2GB. DirectX: Version 11.
Horror Squad Mobile သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူချိတ်ပြီးဆော့လို့ရမဲ့ Horror ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုထွက်ရှိလာပါပြီ ဒီဂိမ်းနာမည်က Horror Squadဖြစ်ပါတယ် Online Multiplayer ဆော့လို့ရပြီးတော့ Android နဲ့ PC မှာပဲရမှာဖြစ်ပြီး ios အတွက်က Coming Soonပါပဲ Online mode နဲ့ Local Multiplayer ဆိုပြီးပါပါတယ် Febလ ကထွက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Cheesecake Devကရေးဆွဲထားတာပါ သူ့ကိုသိမယ်ထင်ပါတယ် Internet cafe တုံးကလဲသူထုတ်တာပါ googleကရှာကြည့်သလောက်ကတော့ Turkeyကထုတ်တာလို့သိထားပြီးပါပြီဒါကြောင့်ဆော့လို့အဆင်ပြေပါတယ် PC Version ကတော့5$ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး Android ကတော့ Free2Playပါ PC Version ကို Crack File Linkပေးထားပါတယ်Gameplayတို့Graphicတို့ကျတော့PCမှာကောင်းတာဖြစ်ပြီး Mobile မှာကအရမ်းကြီးကောင်းတဲ့ထဲမပါပဲသာမန်အသင့်တင့်လောက်ပါပဲ Game Sizeက 340MBလောက်ရှိပါတယ် Android Version 6နဲ့6အထက်ကစပြီးအဆင်ပြေပြေဆော့လို့ရပါတယ် Developer Adress - Turkey Game Size - 340MB Download For Android ( 340MB) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CheesecakeDev.HorrorSquad Download For PC ( 1.6GB) https://megaup.net/2XLfy/Horror.Squad.rar
Apex Legends Apex Legends isafree-to-play hero battle royale game developed by Respawn Entertainment and published by Electronic Arts . It was released for Microsoft Windows , PlayStation4, and Xbox One in February 2019, and for Nintendo Switch in March 2021. The game supports cross-platform play . The game is set in the same science fiction universe as Respawn Entertainment's Titanfall series. A mobile version of the game specially designed for touchscreens titled Apex Legends Mobile has also been announced which is scheduled to be fully released by 2022 on Android and iOS . Download For PC ( 38GB) https://www.ea.com/games/apex-legends Pre-Register ( Mobile) ( PlayStore) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.apexlegendsmobilefps ( TapTap) https://www.tap.io/app/158451
Asphalt Nitro OFFLINE ( Andriod / ios) အင်တာနက်မလိုတဲ့ပြိုင်ကားမောင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Alphalt Seriesထဲက Nitroကိုတင်ပေးမှာပါ Sizeသေးသေးနဲ့ ဆော့လို့လဲကောင်းပါတယ် စုစုပေါင်း ကား ၃၈ စီးပါဝင်ပါတယ် Season 6ခုအထိပါပြီးဆော့ရတာအချိန်တော်တော်ပေးရပါတယ် Offlineမှာ Season 1-6 ဆော့လို့ရပြီး Event modeတွေဆော့မယ်ဆိုအင်တာနက်ဖွင့်ရပါတယ် Offline gameမလို့အချိန်ပေးပီးငွေမရှာပဲ တစ်ခါထဲသူံးလို့ရတဲ့ခိုးပီးသားMod VersionကိုပဲLinkထည့်ပေးထားပါတယ် Matchတစ်ခုကို Missions 2ခုပါပါတယ် Graphicကတော့အသင့်တင့်ပါပဲအရမ်းကြီးဂေါ်ထွက်နေတာတော့မဟူတ်ပါဘူး Graphic ကောင်းပိုကောင်းတာလိုချင်ရင်တော့ ထပ်ပြီး Graphic ကောင်းတဲ့ကားပြိုင်ဂိမ်းတွေထပ်ရှာကြည့်ပါမယ် Apk Onlyပဲမလို့Installပီးတန်းတော့လို့ရပါတယ် Game Size - 50MB Download Link ( ခိုးပြီးသား Version) (Linkထဲဝင်ပြီး Go To Download Pageကိုနိပ်ပြီး Mod ကိုရွေးဒေါင်းပါ ) https://rexdl.com/android/asphalt-nitro-apk-download.html/ #LegendaryGamer
Occupation 2.5 ( Andriod / ios ) Openworld Action ဂိမ်းကိုမှ Mobile ဖုန်းပေါ်မှာဆော့ကစားလို့ရတဲ့ Survival ဂိမ်းတစ်ခုတင်ပေးပါမယ် ဒါကတော့ Occupation2ဖြစ်ပါတယ် ဆော့ပုံဆော့နည်းကရိုးရှင်းပါတယ် Zombie တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ် သင်က လူသားတွေကို Zombie ရန်က ကာကွယ်ပေးရမှာပါ တစ်ကောင်သတ်တိုင်းပိုက်ဆံရပီး ပိုက်ဆံနဲ့ Foodတွေ armor တွေ Gunတွေဝယ်လိူ့ရပါတယ် အရင် 1နဲ့2ထက်ပိုကောင်းပီး 3မထွက်ခင်ကြားမှာထွက်ထားတဲ့ 2.5Versionဖြစ်ပါတယ် အရင်ထက်Mapပိုကျယ်ပါတယ် 1တုံးကလူနေအိမ်တွေဝင်လို့မရပေမဲ့အခုအိမ်တွေဝင်လို့ထွက်လို့ရနေပါပြီ Neighbors တွေအများကြီးစုထားလို့ရပြီးတော့ Zombie အမျိုးစားအသစ်တွေလဲပါဝင်လာပါတယ် Graphic နဲ့ Gameplay ကပိုကောင်းလာပြီး Day/Night Modeကလဲပိုပြီပြင်လာပါတယ် မကြာခင် 3ထွက်မှာမလို့ 2.5တော့လို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဂိမ်းရဲ့Sizeကတော့ 160MBပဲရှိပါတယ် Game Size - 160MB Download Link Andriod အတွက် https://apkpure.com/occupation-2/com.the3daction.Occ2 Ios အတွက် https://apps.apple.com/us/app/occupation-2-5/id1444153551
မြန်မာတော်လှန်ရေးဂိမ်း ( Z Revolution ) ( Andriod နှင့် PC အတွက်သာရရှိပါမည် ) အမည်မဖော်လိုတဲ့ Game Development Team တစ်ခုက release ထားတဲ့ မြန်မာတော်လှန်ရေး Strategy ဂိမ်းအသစ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် ထွက်တာကြာပေမဲ့အင်တာနက်အခုမှရလို့အခုမှပဲသိပြီးပြန်တင်ပေးတာပါ Early access Versionဖြစ်ပြီး Full gameမလာသေးပါဘူး Plant Vs Zombie ပုံစံ Strategy ဂိမ်းဖြစ်ပြီးတော့ Revolution ဆန်ဆန်ဆော့ကစားရမှာပါ Free to play ဆိုပေမဲ့ Donateလို့ရပါတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆော့ကစားလို့ရမဲ့ဂိမ်းလေးမလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ် ဂိမ်းSizeကတော့ Android Versionမှာ 64MBရှိပြီး PC Version မှာ 40MBရှိပါတယ် DOWNLOAD LINK https://zrevolution.itch.io/zrevolutionthegame